यसरी छोप्नुस् भद्दा पेट
Tuesday, 23 April 2013 13:30	नागरिक
फेशन गर्न रुचाउनेले आफ्नो शारीरिक बनावटलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। मिलेको शरीरमा हरेक लुगा सुहाउँछ। भुँडी लाग्यो या पेट बाहिर आयो भने शरीर भद्दा देखिन्छ। खानपिन र जीवनशैलीमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा पेट बाहिर पुटुस्स देखिन्छ। धेरै खाने र खानासाथ सुत्ने गर्नाले पेट लाग्छ। शरीरमा बोसो बढाउने पदार्थ धेरै खाँदा पेट लाग्छ। पिसाब धेरै रोक्नाले पनि पेटको आकार नराम्रो देखिने हुन्छ। तिर्खा लाग्दा धेरै मात्रामा पानी खाँदा पनि पेट भद्दा देखिने हुन्छ। खाना खाँदा पानी खानु हुँदैन। खाना खाएको एक घण्टापछि पानी खाँदा स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ।
बस्ने आसनले पनि पेटको आकारमा फरक पार्छ। अफिसमा ज्यादा समय बसेर काम गर्ने हो भने बेला-बेला पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्छ। भर्खर बच्चा जन्माएका महिलाले पेटलाई घटाउन बिस्तारै दबाएर पेटमा कपडा बाँध्नुपर्छ। हप्ताको एकचोटि चिसो या तातो पानीले पेटलाई दबाएर पुछ्ने गर्नाले पेटको छाला राम्ररी कसिँदै जान्छ र थलथले मासु बिस्तारै हराएर जान्छ।
अगाडि निस्केको पेटले गर्दा पनि महिलालाई लुगा लगाउन समस्या हुन्छ। कस्तो परिधानमा सुहाउँछ र कस्तो परिधानको प्रयोगले बाहिर आएको पेटलाई लुकाउन सकिन्छ, त्यसबारे पनि विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ। कपडा लगाउने तरिकामा केही फेरबदल गरेर अगाडि निस्केको पेटलाई लुकाउन सकिन्छ। जस्तोः धर्का भएको परिधानको प्रयोगले पेट कम देखिने हुन्छ। ठूलठूला बुट्टा भएका परिधानले पेटलाई झन् ठूलो बनाउँछ। अगाडि निस्केको भद्दा पेटमा कहिले पनि पातलो सारी लगाउनु हुँदैन। त्यस्तै, सुट प्रयोग गर्दा टाइट र लुज दुवै प्रयोग गर्नु हुँदैन। टाइट आउटफिटले पेटको मासु पार्ट-पार्ट छुट्टिएको देखिन्छ भने लुज आउटफिटले झन् बढी मोटो एवम् भद्दा देखाउँछ। ब्लाउज लगाउँदा तलको बटन या हुक कसेर लगाउनु हुँदैन। त्यस्तो कसिएको हुक र बटनले पेट झन् भद्दा देखिन्छ। साथै, साँचाको झुत्ता पेटमा झुन्डाउनु हुँदैन।
-जयन सुब्बा मानन्धर
शुक्रवारको कार्यकारी सम्पादकमा राजन (2013-04-20)
कैँचीको टक्कर (2013-04-19)
बिनाको विश्वास (2013-04-19)
अपरिहार्य नवीन संकल्प (2013-04-14)
हिरोइनहरुको नयाँ वर्ष प्लान के छ? (2013-04-14)
नयाँ वर्षमा नयाँ प्रण (2013-04-14)
खेलाडीका नयाँ वर्ष संकल्प (2013-04-14)
पाठक हाम्रो सर्वस्व (2013-04-13)
अपरिहार्य नवीन संकल्प (2013-04-13)
नयाँ संवत् (2013-04-13)
बोस्टनका बन्धक दिन
उत्तमबाबु श्रेष्ठ, बोस्टन (अमेरिका)-अमेरिकाको ऐतिहासिक सहर बोस्टनमा हरेक वर्ष ...
- उत्तमबाबु श्रेष्ठ
अन्तरिक्षबाट कस्तो देखिन्छ पृथ्वी?
मर्न देऊ, पोर्नोग्राफी बचाऊ
खगेन्द्र दाजु नमर्नूस् प्लिज
'बिहे नहोला जस्तो छ'
'बक्स अफिस' को प्रतीक्षा
धेरै फिल्म, धेरै घाटा
मृत लेखकको कथन
फरक मुद्रामा ईश्वरवल्लभ